Qorshe Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada oo 6 Tallaabo oo Fudud | Martech Zone
Warbaahinta bulshada ayaa kusii socota horumarka shabakad, dhegeysi, daabacaad, taageero, iyo aalad dhiirrigelin u ah ganacsiyada. Xayeysiinta warbaahinta bulshada ayaa horay u socota, iyadoo siineysa habab badan iyo bartilmaameed horumarsan taas oo yareyneysa kharashka hawlgal kasta. Meelaha loogu talagalay dhageysiga, ka jawaab celinta, daabacaadda, cabbiraadda, iyo fulinta ololeyaasha ayaa la aasaasay oo ay sii wadaan inay bixiyaan waxyaabo badan oo ganacsi.
Iyada oo ay jiraan aalado badan oo warbaahinta bulshada ah oo hadda la heli karo, way fududahay in lagu jahwareeriyo ama aan la hubin sida loo horumariyo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee bulshada maanta ku xiran. Shabakadaha warbaahinta bulshada waa mid ka mid ah waddooyinka ugu wanaagsan ee lagu hormarin karo astaantaada adduunka. Iyadoo in ka badan 2.7 bilyan oo adeegsadeyaal ah adduunka oo dhan, shaki kuma jiri karo in baraha bulshadu ay bixiso awood aad u weyn waxayna saameyn dhab ah ku leedahay ganacsiga 'khadka hoose. Emedia Hal abuur
Wax badan ayaan ka baranay jidka oo dhan. Inta badan, magacyadu waxay baranayaan in baraha bulshada ay yihiin habab weyn oo lagu dhiso wacyiga iyo kaqeybgalka wadista; laakiin had iyo jeer ma aha dhexdhexaadka ugu wanaagsan ee iibka tooska ah. Waxaan sidoo kale ognahay in baraha bulshada ay u wareejisay qanacsanaanta macaamiisha goob fagaare ah halkaas oo macaamiisheenna mustaqbalka ay ka aqrin karaan wax ku saabsan khaladaadka sumadda. Waa mashiin awood badan u leh macaamilka iyo ganacsigaba, laakiin waxay noqon kartaa mid jahwareer leh oo qaali ah haddii aan lahayn qorshe suuqgeyn weyn oo warbaahinta bulshada ah.
Waa maxay Qorshaha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada?
Si aad u soo saarto natiijooyin wax ku ool ah, waxaad u baahan tahay qorshe suuq-geyn warbaahinta bulshada ah oo la jaan qaadaya ujeeddooyinkaaga ganacsi. Waa inay kujirtaa booskaaga hada ee xisaabaadka warbaahinta bulshada, sida aad ugaqimeyso tartankaaga, yoolalka bartilmaameedka mustaqbalka, iyo dhamaan talaabooyinka iyo aaladaha aad u adeegsaneyso inaad halkaas ku gaarto.
Qorshaha suuqgeynta warbaahinta bulshada wuxuu u adeegaa sidii naqshadda dhammaan ficilladaada, iyo sidoo kale hab lagu go'aamiyo in dadaalkaagu uu helayo iyo in kale.
Talaabooyinka Qorshaha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Samee ujeeddooyinkaaga warbaahinta bulshada iyo yoolalkaaga - hubi inay la jaan qaadayaan istiraatiijiyaddaada guud ee suuq-geynta si loo hubiyo in istiraatiijiyaddaadu ay wado natiijooyin ganacsi oo waaweyn.
Samee xisaab hubin ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada - hel sawir kooban oo ku saabsan xaaladdaada hadda jirta ee warbaahinta bulshada oo aad barbar dhigto kuwa kula tartamaya.
Abuur ama ku hagaaji astaamahaaga warbaahinta bulshada - iyadoo xisaabintaadu dhameystiran tahay, waxaa la joogaa waqtigii aad hagaajin lahayd joogitaankaaga warbaahinta bulshada.
Dhiirrigelinta waxqabadkaaga warbaahinta bulshada - u fiirso dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada ee tartamayaasha iyo astaamaha kale ee la xiriira warshadaha si aad u aragto sida aad u kala duwanaan karto joogitaankaaga.
Samee qorshe qoraal ah iyo jadwalka tifaftirka - dhajinta iyo wadaagida waxyaabaha ku habboon si joogto ah ayaa ah tan ugu muhiimsan ee lagu hubinayo guusha warbaahinta bulshada.
Lasoco, qiimee, oo hagaaji qorshahaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada - kormeer joogto ah iyo cabiriddu waxay muhiim u yihiin sida haysashada xeeladaha hawlgalka saxda ah ee suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Kafiiri dhammaan faahfaahinta, talooyinka, iyo talobixinta ku jirta xogtan macluumaad ee ka socota Emedia Creative, Sida loo dajiyo Istaraatiijiyad baraha bulshada oo la jaanqaadaya ujeeddooyinka ganacsiga.
Tags: nuxurka tifaftirkaemedia hal abuurdaawayn degdeg ahhanti dhowrka warbaahinta bulshadawaxyaabaha ku jira warbaahinta bulshadahawlgelinta warbaahinta bulshadaMedia Social Suuqqorshaha suuqgeynta warbaahinta bulshadatallaabooyinka suuqgeynta warbaahinta bulshadaqorshaha warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshadatallaabooyinka warbaahinta bulshadayoolalka warbaahinta bulshada
Sep 13, 2017 at 1: 45 AM
Infographic Aad u Weyn .. Mahadsanid !!